Global Voices teny Malagasy » Mali : Fifidianana Hamaritra ny Hoavy Amin’ity Taona 2018 ity · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 10 Avrily 2018 5:42 GMT 1	 · Mpanoratra Alassane ndoumbe Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Afrika Mainty, Mali, Ady & Fifandirana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fifidianana, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Voina
Opération Barkhane eo amin'ny fifandraisana amin'ny mponina ao atsimon'i Mali avy amin'i TM1972 – CC-BY-4.0
Mampiharihary ny tsy fisian'ny fandriampahalemana maharitra miorim-paka ao amin'ny firenena ny fifanandrinana indray  teo amin'ny tafika Barkhane (hetsika fitandroana ny fandriampahalemana ataon'ny tafika frantsay) sy ny vondrona jihadista tao avaratr'i Mali nandritra ny faran'ny herinandron'ny paska, volana vitsivitsy monja mialoha ny fifidianana hamaritra ny hoavin'ny firenena.
« Pas de trêve pascale au Mali » [Tsy misy fampiatoana ady mandritra ny paska ao Mali] hoy ny lohatenin-gazety Ouest France . Nisy tokoa ny fifampitifirana mahery vaika teo amin'ny djihadista sy ny mpiady mpanohana ny fitondrana tamin'io faran'ny herinandro io. Ny hetsika famantarana sy fifehezana tany niarahan'ny tafika frantsay tamin'ny milisin'ny MSA-GATIA, vondrona mitam-piadiana iray manohana ny governemantan'i Bamako teo amin'ny sisintany iraisain'i Mali sy Niger no niafara tamin'ny famonoana mpikambana miisa 30  an'ny vondrona mpampihorohoro mitam-piadiana iray. Tsy nisy miaramila frantsay manatontosa ny opération Barkhane maty na naratra nandritra ny fifampitifirana.
Fandrahonana tsy mety manjavona
Efa mampisy fanantenana ny fahombiazan'io bemidina io – tahaka ny ankamaroan'ny bemidina natao faramparany teo – saingy tsy mbola mampilamina ny toe-draharaha ao avaratr'i Mali izay tsy niova nandritra ny taona maro. Niparitadritaka sy voaroaka tany avaratr'i Mali ny vondrona djihadista hatramin'ny taona 2013. Saingy misy ny faritra midadasika ao amin'ny firenena tsy mbola voafehin'ny fahefana  – na dia eo aza ny fanohanana mavitrika avy amin'ny tafika frantsay. Ankoatra izay, manararaotra ny korontana navelan'ny fifanandrinana,nihaniroborobo ny asan-jiolahy araka izay nasongadin'ny famonoan'olon-tsy fantatra ny kaporaly iray tao afovoan-tanànan'i Tombouctou.
Ny tena henjana, nihoatra sisintany ankehitriny ka nahazo ny firenena mpifanolo-bodirindrina, indrindra fa i Burkina Faso sy i Niger ny fifanandrinana. Hany ka nahatonga ny fampitandremana avy amin'ny Firenena Mikambana manoloana ny tsi-fandriampahalemana izay: « mihamivelatra sy mihamahazo vahana ao afovoan'ny firenena » tamin'ny tatitra nataony vao haingana. Ary ny tena mampanahy dia ho tafatoetra maharitra ao Sahara Lehibe ny Fanjakana Islamika. Nanoritra  ny Firenena Mikambana :
Ny fahaverezan'ny fifehezana sisintany, miampy ny fitomboan'ny fisarasarahan'ny vondrona mitam-piadiana [manohana ny fitondrana] araka ny foko misy azy ireo avy no mahatonga ny firoboroboan'ny vondrona mitam-piadiana tsy nanao soniam-pifanarahana. Ireny fisarasarahana ireny no tena loza mihantona amin'ny fampiharana ny fifanarahan'i Alger natao tamin'ny taona 2015 ary loza mihantona hoan'ny fandriampahalemana amin'ny ankapobeny.
Noheverina hiaraka amin'ny fampihenana ny herisetra io taratasy fifanarahana, nosoniavin'ny fitondrana maliana sy ny fiarahan'ny vondrona Touareg sy Arabo mitam-piadiana io. Saingy, araka ny fijoroana vavolombelon'ny diplaomaty iray tsy nitonona anarana, tsy nisy ihany koa ny fivoarana teo amin'io lafiny iray io. Tompon'andraikitra amin'ny fahatarana misy ankehitriny « ny ankolafiny rehetra ».
Fifidianana hamaritra ny hoavy
Iray amin'ny varavarana ivoahana amin'ny kizo ankehitriny ny fifidianana ho filohampirenena kasaina hotontosaina ao anatin'ny efa-bolana. Raha mety hampitony ny sasantsasany amin'ny fifanenjanana misy ankehitriny izany, dia mety hanasarotra kokoa ny toe-draharaha raha vao tsy azo inoana ny voka-pifidianana. Noho ny toe-draharaha misy eo amin'ny firenena, mitoetra ihany koa ny fisalasalana – voalohany amin'izany, mbola hirotsaka hofidiana ve ny filoha Ibrahim Boubacar Keïta ? Ankoatra ny olana politika, misy ihany koa ny fahasarotana ara-teknika : ahoana ny atao hamantarana ireo mpifidy manakaiky ny 7 tapitrisa ? Ahoana no atao amin'ny fanangonana sy ny fandefasana tsy misy raorao ny voka-pifidianana?
Nampanatena « ny hametraka rafi-pamantarana biômetrika ny kara-pifidianana » ny komity misahana ny fifidianana, saingy nahazo tsikera avy amin'ny mpanohitra izany tetikasa izany, izay mihevitra azy ho lafo (54 tapitrisa euros tsy misy hetra) sy sarotra tanterahina amin'izao fotoana izao.
Sarotra, mety ho tsy azo tanterahina, ao anatin'ny efa-bolana mialoha ny fifidianana izay mbola faritra maro no tsy misy jiro sy aterineto eto amin'ny firenena izany tolotra noraisina izany. Azo natao ihany koa ny nirona tany amin'ny vahaolana tsy lafo haka ny fampiasana ranomaintsy tsy mety voakosoka sy ny fanasoniavana ny lisitra, tahaka izay atao any Frantsa.
hoy ny mpanolotsaina akaiky  ny Praiminisitra Soumeylou Boubèye Maïga.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/04/10/117523/
 fifanandrinana indray: http://afrikinfos.net/2018/04/04/une-nouvelle-operation-ciblee-attribuee-a-la-force-barkhane-au-mali/
 Ouest France: http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2018/04/03/barkhane-poursuit-ses-operations-conjointes-a-la-frontiere-d-19224.html
 tsy mbola voafehin'ny fahefana: http://www.rfi.fr/emission/20180404-une-insecurite-persiste-mali-attentat-edouard-philippe
 hoy ny mpanolotsaina akaiky: http://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/03/13/les-maliens-voteront-en-juillet-pour-la-presidentielle-mais-comment_5270268_3212.html